Izitshalo zangaphakathi | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Izitshalo zangaphakathi
Izincomo zokunakekelwa kwe-violet ekhaya
I-Saintpaulia iyisitshalo esivamile kakhulu esasendlini futhi saziwa ngegama le-violet e-Saint baroque. Izinhlobo ezingaphezu kwezinkulungwane ezingu-32 zalesi sitshalo zikhona namuhla. Kodwa ngokushesha nje uma uthenga i-violet, umbuzo uvele ngokushesha: "Ungayinakekela kanjani kahle?". Ukukhetha indawo engcono kakhulu ye-Saintpaulia Inkinga yokuqala eyasuka ngokushesha ngemuva kokubonakala kwe-violet endlini kwakuwukukhetha indawo yayo.
Izici ukunakekela ama-geraniums, indlela yokutshala isitshalo sezindlu
Kulesi sihloko sizokutshela konke ngegumbi geraniums (ebizwa nangokuthi "kalachik"), okungukuthi: kanjani ukunakekela lesi sitshalo, kunjani lapho utshala khona nokuthi ungakhetha kanjani ibhodlela elifanele. Ungakhohlwa ukukhuluma ngezindlela zokukhiqiza kwe-pelargonium. Uyazi? Umndeni waseGeranium unezinhlobo ezingaba ngu-800 futhi usakazeke emvelweni eningizimu ye-Afrika nase-Australia.
Izihlahla eziluhlaza "Vanya wet", ukunakekela imbali ekhaya
Ibhalsamu (Impatiens) yisitshalo sekhaya esijwayele kithi kusukela ebuntwaneni. Igama lesiLatini elithi Impatiens lihunyushwe ngokuthi "lokuthinta", ngoba imbewu yebhasamu iyahlakazeka ngezindlela ezahlukene uma ubathinta. Ngokujwayelekile le mbali ihlotshaniswa nobuntwana, ngoba cishe wonke ugogo endlini wayene "Spark", njengoba kubizwa.
Kungenzeka yini ukutshala i-lily ekhaya?
Ngenxa yokwakheka okungavamile, ubuhle besibhakabhaka obunzima, iminduze ibhekwa njengophawu lokumsulwa nokungabi namacala. Kuze kube manje, lezi zimbali zihlobisa imikhosi emihle nemikhosi yezinkolo eziningi. Kungenzeka yini ukutshala i-lily ekhaya? I-lily elikhulayo lihlobisa indlu hhayi kuphela ngobuhle bezimbali nemifino ekhanyayo, kodwa futhi nephunga elimnandi eliphikelela.
Pelargonium: ukunakekelwa, ukuzala, ukusika izihlahla
Izwe lakwa-pelargonium yi-India neNingizimu Afrika. Lesi sitshalo esiqhakazelisayo esinamaqabunga aluhlaza awaziwa nje ngobuhle nobuhle bawo kuphela, kodwa futhi nezakhiwo zalo zokwelapha, futhi ama-esotericists akholelwa ukuthi i-pelargonium endlini ilawula isimo sezulu esingokwengqondo emndenini. Izinhlobo zePelargonium Pelargonium yisitshalo somndeni waseGeranium.
Indlela yokukhulisa izimbali ezinhle ze-orchid ekhaya
Mhlawumbe, kuyoba nzima ukuthola imbali phakathi kwezinhlobonhlobo zezitshalo zasendlini ezodlula i-orchid ekukhangeni kwayo. Ikamelo le-orchid linomhlanga omude futhi omncane, futhi phezulu kukhona imbali enhle. Ama-orchid enchants futhi athakazelisa ngezindlela ezihlukahlukene nemibala. Noma kunjalo, i-orchid iyinhloko kakhulu futhi inezinkinga eziningana ekunakekeleni.
Amathiphu ekukhuleni ekamelweni lokuvuna
Ikamelo le-Primula liyisikhathi eside sinqobe isihawu kwabathandi bezitshalo zasendlini. Ihluke ekungenikeni ekushiyeni, ubuhle nezimbali zezimbali. Ngokwayo, ukuphakama kwe-primrose kungafinyelela ngamasentimitha angama-25. Uhlelo lwempande luyi-fibrous, amaqabunga e-rosette, angaba ngu-7 cm ububanzi. I-Primrose blooms kabili ngonyaka - entwasahlobo nasebusika.
Izimfihlo zokutshala nokunakekela i-beret yangaphakathi
Uma ufuna isitshalo esimnandi nezimbali, khona-ke i-euonymus ayinakwenzeka "ukubamba iso lakho", kodwa ukuze uthole abasaziwayo bezinto ezivuthiwe, yilokho okudingayo. Izimbali zalo ziyingcosana futhi zingenakuqhathaniswa, kodwa zingase zibe ngaphezu kwalokho engadini yakho noma efulethini "lokushisa okushisa". Ngingathanda ukuxoxa ngenketho yokugcina ngokuningiliziwe.
Okudingayo ukwazi uma uhlwanyela futhi ukhula umuthi wama dollar, amathiphu abatshali bembali
Namuhla sizokutshela izimfihlo zokutshala futhi sikhule "umuthi wama dollar". Uzofunda izinto eziyisisekelo zokunakekelwa nokuzalana, kanye namaqiniso ambalwa athakazelisayo mayelana nesitshalo. Uyazi? Ngo-1908, umqondisi we-Berlin Botanical Garden u-Adolph Engler wanikeza igama lesimanje esitshalweni, esasithola ngenxa yokufana kwamaqabunga namaqabunga e-zamia.
Indlela yokutshala nokukhula ixora ekhaya lakho
Ixora yisitshalo sezitshalo ezishisayo, esibizwa ngokuthi unkulunkulu wamaHindu. Ngenxa yokubukeka kwayo, le nmbali ibhekwa njengesihlahla esihle kakhulu sekhaya. Ixora yi-shrub ende, ekhonjiswe ngombala ohlukile, ocebile omsundu kanye nama-inflorescences afane nesambulela.
Indlela yokukhulisa abanturium, imithetho yokukhula nokunakekela imbali
Isitshalo sezindlu esithakazelisayo esinemibala egqamile yesimo esingavamile, esibonakala sengathi i-plastic kusukela kude, kuthiwa i-humansrium. Izimbali ezibukeka kahle, ngenxa yezinto ezidumile, okuthiwa "i-flower flamingo." Izimo ezikhulayo ezikhulayo Ukuze lesi sitshalo singakujabulisi nje ngamahlamvu aqhakazile, kodwa futhi nezimbali ezinhle, kubalulekile ukufeza zonke izimo zokukukhuphula.
Izifo eziyinhloko nezinambuzane zabanturium
I-Anthurium iyimbali ethandwayo evelele eyafika kithi kusukela ezindaweni ezikude kakhulu ezishisayo zaseNingizimu naseNyakatho Melika. Ngenxa yombala ongajwayelekile, i-humansrium ikhula ngokwanele ekhaya, kodwa ngenxa yezici ezihlukahlukene, lesi sitshalo sithinteke kakhulu ezinhlobonhlobo zezifo. Ukuze uqonde ukuthi ungalondoloza kanjani abanturium uma kwenzeka ugula, udinga ukwazi ukuthi bangubani.
Indlela yokutshala nokukhula kweCaladium ekhaya, amathiphu ekunakekeleni isitshalo esishisayo
Lapho ukuthola khona i-caladium, ukukhethwa kwendawo ye-Caladium isitshalo se-thermophilic (i-Caladium) ummeleli womndeni we-Aroid (i-Araceae). Izwe lakuleli sitshalo yiBrazil, lapho likhula khona emaphethelweni ase-Amazon. Lesi yisitshalo esikhulu esithisa ukushisa, esimweni esingokwemvelo singafinyelela ku-5m ukuphakama. Ekhaya, i-Caladium isetshenziselwa ukukhipha isitashi, futhi endaweni yethu lesi sitshalo siyathandwa ngenxa yokubukeka kwayo.
Izimbangela zokuphuza nokuma amaqabunga e-hydrangea
I-Hortensia - imbali emangalisayo, enezinhlobo ezingaba ngu-90. Kodwa-ke, ukuze lesi sitshalo sijabulise iso lakho, kuzodingeka usebenze kanzima, ngaphandle kwalokho amaqabunga e-hydrangea azoqala ukuphenduka, aphumele ngaphandle, futhi isitshalo ngokwaso siyofa ngokuphelele. Kungani i-hydrangea isomile? Izizathu zingase zibe eziningi, phakathi kwazo: Ukuchelela okubi; Umoya owomile egumbini lapho i-hydrangea ikhula khona; Ukufakelwa okungalungile; Ukukhanyisa okungalungile; Ukukhulelwa okwanele kwenhlabathi (kuncishiswe i-asidi yayo); Ukuntula ukuchithwa kwamahlamvu; Ukukhetha okungalungile kwenhlabathi yokutshala.
Izakhiwo eziwusizo ze-Kalanchoe
Bambalwa abantu abazi, kodwa isitshalo iKalanchoe asigcini nje kuphela njengento yokuhlobisa igumbi, kodwa futhi ingasiza ekuphulukeleni izifo ezihlukahlukene. Amaqabunga amahle eKalanchoe ikakhulukazi anezakhiwo ezizuzisayo. Umusi wabo uyisithako esibalulekile semithi enqunyelwe abantu abadala kanye nezingane. Kungalungiswa ekhaya noma kuthengwa ekhemisi.
Incazelo yezinhlobo ezidume kakhulu ze-Kalanchoe
I-Kalanchoe yisitshalo esingasetshenziswa emndenini we-colossae, eya eYurophu evela emahlathini emvula ase-Asia, eMelika nase-Australia. Muva nje, yaqala ukuzala njengesitshalo sekhaya, esihlaba umxhwele ngokuhluka kwayo. Izinhlobo ze-Kalanchoe zimelelwa ngamagama angaphezu kuka-200, hhayi ukubala izinhlobo nezinhlamvu.
Ukusetshenziswa kwe-aloe emithi yokwelapha
I-Aloe yisitshalo esithandwa kakhulu ekhaya esetshenziselwa ukusetshenziswa kwesikhathi esizayo. Kunezinhlobo ezingaphezu kwezingu-350 zalesi sitshalo; ekhaya, kuphela ezinye zazo ezikhulile - i-aloe efana nesihlahla, i-variegated, i-spinous. Izakhiwo zokuphulukisa zitholakala ku-aloe vera nesihlahla se-alo. I-aloe vera evame kakhulu, eyaziwa nangokuthi yi-Barbados noma i-aloe.
Izinhlobo zekhaya begonias
I-Begonia ingenye yezitshalo ezithandwa kakhulu futhi ezinhle kakhulu emafasitela asekhaya asekhaya, emasimini nasemapaki edolobheni. Lesi sitshalo sinezinhlobo ezingaphezu kuka-900 ezigcwele nezinhlobo ze-hybrid ezingu-2000. Imbali yokuqala yachazwa nguMichel Begon, owathola imbali ehlobisa, enhle kakhulu e-Antilles.
Ukulingana okufanele nokunakekela uCleus
I-Coleus iyisitshalo sezimbali, kodwa asibaluli kakhulu izimbali, njengama-motley namaqabunga afakiwe. Noma kunjalo, ubuhle bukaCleus nakho nezinye izinzuzo eziningi. Kungaba kokubili endlini nasendlini, futhi kuzo zombili izimo ngeke ube nobunzima ekunakekeleni, okungekho noma isiphi sikhonsela esingakwazi ukubhekana nayo (Yebo, uma eqonda ukutshala kwe-coleus).
Indlela yokukhulisa isigela ekamelweni lakho, ukutshala nokunakekela isitshalo
I-weigel yisitshalo sezinhlobo zezitshalo ezinqabile, umndeni we-honeysuckle. Kunezinhlobo ezingu-15 ze-weigela, okuyizinhlobo ezingu-7 ezihlwanyelwe kuzo, futhi njengesitshalo sendlu, isisindo kuphela esilungele i-hybrid. Ngokwemvelo evulekile, lesi sitshalo sikhula ikakhulu empumalanga naseningizimu-ntshonalanga ye-Asia. Uyazi? I-weigela ibizwa ngokuthi uprofesa we-botany, ukhemikhali nokwakhiwa kweJalimane, K.